दृष्टिकोण – Page2– Banking Khabar
नरबहादुर थापा । वित्तीय कारोबार गर्दा प्रयोगमा ल्याईने वित्तीय उपकरण र कारोबार गर्दा अबलम्बन गरिने प्रक्रियालाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । वित्तीय संस्था वा वित्तीय उपकरणमा हिसाबकिताब लगायतका कुराहरु पर्छन् । जान्नुपर्ने कुरा आफूसँग भएको पैसा बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्नुपर्दछ …
उदय राज खतिवडा । लघुवित्त विकास बैंकहरु ग्रामीण भेगमा थोरै थोरै पुँजी परिचालन गरेर संचालित हुन्छन् । यस्ता बैंकहरु जनताको घर दैलोमा पुगेर वित्तीय चेतनाको विकास गर्ने तथा सानो सानो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्त संस्थाहरुले गरीब तथा विपन्न …
मनोज ज्ञवाली । विकास बैंकको खास उद्देश्य भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा देश विकासमा टेवा पूर्याउने हो । विकास बैंकहरु पनि कुनै चिजमा असक्षम छैनन् । हिजो वाणिज्य बैंकहरु पनि दुई अर्ब पुँजीमा नै चलेका थिए । तीन वर्ष पहिलेका वाणिज्य बैंकभन्दा …
लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि र यसको प्रभाव
बलराम पौडेल । बास्तवमा, लघुवित्त भनेको गरिबहरुलाई लक्षित गरिएको एउटा कार्यक्रम हो । लघुवित्तले गरिब तथा न्युन आय भएका मानीसहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पहुँचमा अभिबृद्धि गर्दछ । यस्ता वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिकस्तर माथि उकास्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका …
ढुन बहादुर बुढाथोकी,“सङ्घर्ष” । बिश्वमा सन् १९६० देखि २०० का अवधिमा विश्व रंगमञ्चमा विभिन्न किसिमका बहुपक्षीय, क्षेत्रीय मञ्चहरु स्थापनाको लहर चलको पाइन्छ । यसै क्रममा, दक्षिण पूर्वी एशियामा आसियान, पश्चिम युरोपमा ईयु, उत्तर अमेकिामा नाफ्टा स्थापना भए जस्तै बंगालको खाडी …
चिन्तामणी शिवाकोटी । नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात गर्ने श्रेय डा. हरिहरदेव पन्तलाई जान्छ जो त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थिए । सुरुवाती अवस्थामा लघुकर्जा भनेर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछि, लघुवित्त भन्न थालियो । सरकारी स्तरबाट ग्रामीण बैंक र …
उदय राज खतिवडा । नेपालको समाज विभिन्न खालका परिवेशले बाँधिएको छ । अझै ग्रामीण क्षेत्रका नवविवाहित महिला वा बुहारीले आफ्नो भुमिका सँधै भात भान्सा, चुलोचौको, घरधन्दा र घर परिवारमै रुमलिने हो भनेर बुझेका छन् । उनीहरु व्यवसायिक कामतर्फ चासो राख्दैनन् …
नेपालो वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र समाधानका उपायहरु
डा. गोपाल भट्ट । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले धेरै अवसरहरु छन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै अवसरहरु खुम्चिएका थिए । अहिले राजनीतिक स्थीरता कायम भएको छ । देशले स्थायी सरकार भएको छ । संविधान बनेको छ । अब देशको …
डिपी अर्याल । २०१० सालबाट जापानबाट अन्तरराष्ट्रिय रुपमा रेमिट्यान्स सेवा भित्रिएको हो । अहिले जापानका करिब १० देखि १२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नेपालमा पैसा पठाउने गर्दछन् । जापानबाट अरबौँ रुपैयाँ नेपालमा आउने गरेको छ । नेपालको अर्थतन्तन्त्रमा रेमिट्यान्सले धेरै ठुलो …
प्रकाशराज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले समग्र देशकै विकासलाई समेट्दैै आएको छ । पछिल्लो समयमा आएर देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रुपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र विकास र परिपक्वताको क्रममा रहेको …
आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का लागि केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक मार्ग
संघर्ष बुढाथोकी । मौद्रिक नीतिले प्रमुख उद्देश्य मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि बित्तीय साधन परिचालन गर्नु हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तीको लागिएक आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यदिशा, कार्यक्रम र मौद्रिक उपकरण अबलम्बन गर्ने भन्ने …
मैद्रिक नीति २०७५/७६ : एक समिक्षा
सुरज घिमिरे । देशको समग्र मुद्रा बजारको नियामक संस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने आर्थिक वर्षको कार्य योजनालाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । यसले मुद्राको पूर्तिमाथिको नियन्त्रण गरी मूल्य स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी …
मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक, कार्यान्वयनमा चुनौति
प्रा डा.चन्द्रमणि अधिकारी,वरिष्ठ अर्थविद । अहिलेको मौद्रिक नीति आर्थिक नीति र वित्त नीतिले लिएको लक्ष हासिल गर्नेतर्र्फ निर्देशित छ । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहरु गरेको छ । औसत हिसाबले हेर्दा मौद्रिक नीतिलाई सकरात्मक ढंगले …
ढुन बहादुर बुढाथोकी । मुलुकको आर्थिक जीबनमा पूँजीगत खर्चको महत्व अहम् हुन्छ । यथेष्ट पूँजीगत खर्चबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । पूँजीगत खर्चले बढवा पाउँदा राज्यमा उत्पादन, रोजगारी र आयस्तर बृद्धि हुन्छ । सडक सञ्जाल, जलबिद्युत आयोजना, पिउने पानी, बिमानस्थल, …